Haiti: Mikaonty Ny Fotoana Ho An’ireo Tafavoaka Velona Tamin’ny Horohorontany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Marsa 2018 3:19 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, polski, Italiano, Deutsch, 日本語, Español, English
Amerikana mpanampy mpitsabo 24 taona i Keziah Furth, izay miasa ho an'ny ankizy ao Haiti. Afaka niantso tany an-trano izy androany, ary nandefa ity tantara ity izy sy ny ray aman-dreniny mikasika ny zava-niainany hatramin'ny horohorontany tao amin'ny bilaoginy, Mwen renmen ti moun Ayiti yo! :
Nofonosiny avy hatrany ireo fitaovam-pitsaboana sasany ary nanomboka nanakaiky an'ireo naratra tao amin'ny manodidina azy izy. Nandritra ny roa andro voalohany, tonga tsy tapaka ireo olona naratra. Nony farany, olona 300 no noraisiny tao amin'ny toerana malalaka tsy dia lavitra loatra ka afaka mankao manome fanafody manala fanaintainana, mametraka fehy, manasitrana ny ratra tsy mampiasa fitaovana fandidiana na fitaovana voadio, mizara antibiotika, ary manome sakafo sy rano…izy
.. Milaza izy fa miha-vitsy ireo maratra tsaboina ary mavesatra ankehitriny ny fofom-paty rehefa mandeha eny an-dalambe ianao. Andrenesana fofom-paty ny trano rava rehetra. Raha marobe tamin'ireo “marariny” no sitrana sy ho velona, maromaro kosa no maty.
Mampitandrina i Keziah fa raha tsy tonga haingana ny sakafo sy ny rano ary ny fitaova-pitsaboana, maro no ho faty tsy amin'ny antony. Tsy mbola nahita fanampiana avy any ivelany na ekipa mpamonjy voina ao amin'ny tanàna nitsaboany ireo naratra izy hatramin'izao:
Nahazo sakafo sy rano madio avy ao amin'ny St. Joe's Home i Keziah. Tsy dia faly ny ankamaroan'ny olona; miha-vitsy ny sakafo sy ny rano. Mino i Kez fa raha tsy tonga haingana ny fanampiana, ny alika no hanomboka hovonoina atao sakafo. Tsy nisy fanampiana tonga tao amin'ity faritra ity. Tsy nahita mpiasa misahana fanampiana, fiara mitondra rano, na ekipa mpamonjy voina izy ireo. Hita eny ambony ny angidim-by, saingy tsy nisy fifandraisana natao; Tsy misy porofo fa tonga ny fanampiana. Rehefa nilaza tamin'i Kez aho fa ao P.auP ny tafika amerikana. ary tonga koa ny Vokovoko Mena sy ny ekipa mpamonjy voina sy ny mpitsabo, dia nitomany izy.
Tsy ampy intsony ny fitaovam-piasan'i Kez; Novinavinainy fa tsy hanana lamba atao fehy, tsy misy fanafody sy rano homena intsony izy amin'ny Alakamisy.
Nanao izay rehetra azony atao ho an'ireo naratra izy. Raha tsy tonga haingana ny fanampiana, ho fatifaty foana ny olona.